Svondo, Kukadzi 14, 2016 Local time: 12:01
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai (L) Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe (R)xMutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai (L) Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe (R)
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA— Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi pamwe nenyaya dzezvematongero enyika dzinoti hurumende yeZimbabwe nevanhu vayo, ndiyo inogona kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambura muSouth Africa.
VaChitanga vanoti munyika mukaratidza kuti mava nerunyararo, vakatiza mhirizhonga yezvematongero enyika vanogona kudzoka kumusha. Asi vanoti veruzhinji vakatarisira mafambiro achaita sarudzo gore rinouya vasati vafunga nezvekudzokera kumusha. VaChitanga vanoti hurumende yemubatanidzwa inofanirwa kudzika mitemo inodzivirira kubiwa kwezvicherwa, kupambwa kwemapurazi nezvimwe zviri kutorwa neavo vane zvinzvimbo muhurumende, kuitira kuti vanhu vaone kuti mitemo yava kuremekedzwa.
Ukuwo ongororo yakaitwa mwedzi uno ne Afro Barometer ichishanda nesangano reInstitute for Democracy in Southern Africa, inoratidzawo kuti zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinodarika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana, hazvivimbe nevanhu vekune dzimwe nyika, uye vamwe vacho, havadi kuti vanhu ava vagare munzvimbo dzavo. Kudzamara Zimbabwe yagadzirisa zvinhu zvayo sematauriro ari kuita VaChitanga naVaNdlovu, vanhu vakawanda vemuZimbabwe vari mu South Africa vachagara vakabatira ura mumaoko nekutya, zvikuru seyi pose pavanofunga nezvemhirizhonga yemarudzi, pamwe nemabatirwo anoitwa vanhu pakamba yepaLindela, apo vanenge vachidzoserwa kuZimbabwe nechisimba.